Akụkọ - nddị mara mma-ụdị nkọwa yoga ogologo ọkpa
Dịka ihe dị oke mkpa na yoga na ahụike, ahụ na-eme ka uwe ogologo ọkpa na-adịwanye mkpa. Nleghari anya nke oma karia ma karie. Na ndabere nke ịgba mbọ hụ na egwuregwu na-arụ ọrụ, a na-eleba anya na ịba uru na ụdị ejiji. Nkọ zuru ezu imewe nwere ike ime ka nkịtị mma ekwekọghị rejuvenate. . Nkwupụta a ga-eji okwute ụkwụ chọọ mma, mkpokọta mkpokọta mkpokọta, nkọwapụta ụkwụ, mgbanwe ihu ụkwụ, mgbakwunye ịchọ mma ọzọ, na oghere dị iche iche dị ka isi ihe iji dozie ọrụ ọrụ na imepụta ihe eji eme ihe n'ime ya, ma weta mmụọ nsọ maka ndị nrụpụta iji mepụta ngwaahịa ọhụrụ.
Dị ọdịdị dị iche iche dị iche iche dị iche iche nke obe nwere ike imeziwanye eriri olu ma gosipụta eriri nwanyị; a n'usoro n'úkwù nke 2022 mmiri na n'oge okpomọkụ yoga ogologo ọkpa nwere mgbanwe ndị ọzọ, na iche na agba-efegharị efegharị ntụpọ ụkpụrụ na iche na agba cross-ekara webbing na-ike n'ime ime Yoga ọzọ fashionable mgbe na-agbakwunye a aka nke ije; nke abuo, obe nwere ike imechi, gosiputa aka nke ukwu nwanyi, sexy na ejiji.
Nkọwa zuru ezu nke ụkwụ-yoga ogologo ọkpa na-enye ọrụ nke ịkwado ụkwụ mgbe a gbatịpụrụ ya nke ukwuu, na-egbochi ụkwụ ịpụ na ịzere ihere; nkọwa oge ntinye ụkwụ nke oge ọhụụ na-ewu ewu ma dị iche iche, a na-ejikọkwa ọdịiche dị iche iche na ntanetị na mgbakwunye iji gbakwunye isi okwu na mkpokọta, a na-atụ aro ka oge opupu ihe ubi na oge ọkọchị nke 2022 nwere ike ịmalite uwe ogologo ụkwụ na-agbanwe agbanwe na bọtịnụ eji achọ mma na oghere ụkwụ maka idozi, ndị na-eri ihe nwere ike idozi nkọwa ụkwụ ụkwụ n'onwe ha. N'otu oge ahụ, enwere ike ijikọ ya na igbe igbe onyinye rịbọnụ dị iche iche. Ndị na-azụ ahịa nwere ike ịhọrọ nke masịrị ha, nke na - eme ka ihe na-atọ ụtọ nke ndị ahịa ma nwee ike igbo mkpa ha. Na mgbakwunye na usoro ịkpa ụkwụ nke webbing, ihe eji eme ihe eji eme ihe ga-egosi na nkwonkwo ụkwụ nke ụmụ nwanyị;
Nhazi nke oghere ụkwụ bụ usoro a na-ahụkarị nke ndị na-emepụta ihe na-eji eme ihe. Otu esi enweta ihe omuma na ejiji bu ihe anyi kwesiri ilebara anya; maka oghere mmeghe nke oge ọhụrụ, ịnwere ike ịnwale ọgwụgwọ dị iche iche dị iche iche, na ịmịcha mpempe akwụkwọ na-egbuke egbuke na oghere oghere. Nke abuo Ntughari nke otutu ndi mmadu bu ihe ndi ozo na-eme ka ejiji di nma. Ntughari nke uzo silk na-emeghe oghere nke asymmetrical kwesiri nlebara anya na oge opupu ihe ubi na oge ọkọchị nke 2022.
A na-eme akwa dị n'akụkụ nke obere akpa na-agbanwe agbanwe. Ihe ndozi ahụ sitere na uwe ndị dị n'èzí, nke dị mfe maka ibudata ihe. Enwere ike iji ya dị ka ihe ịchọ mma na yoga yoga. O nwekwara ike ịkwado ndị na-emega ahụ ka ha pụọ ​​maka ahụ ike ma buru obere ihe dị ka kaadị nnweta na igodo, nke na-eme ka mma dị mma; Enwere ike ịgbanye eriri n'úkwù n'akụkụ úkwù, nke mere na ndị na-azụ ahịa nwere ike idozi mgbatị n'úkwù n'onwe ha, na echiche nke ejiji ejiri okpukpu abụọ.
A ga-anọgide na-eji usoro olulu ahụ mee ihe n'oge opupu ihe ubi na ọkọchị nke 2022. Ebe a na-akọ mmiri ga-abawanye n'oge ọhụrụ. N'otu oge ahụ, nha nke oghere a nwere usoro buru ibu karịa nke mbụ, ọ na-egosipụtakwa ihe eji aka arụ ọrụ na mbụ, na-egosi ịdị mma. Na sexy.